Akka qopheessaan tartiiba qubee jijjiiramee Nagaasaa Hundee jedhamu jedhutti, sababni qubeen 'L' dura buufameef, ulaagaalee armaan gadii kana waan guuteefi jedha. Oromia Shall be Free |
bilisummaa June 4, 2017	Comments Off on Akka qopheessaan tartiiba qubee jijjiiramee Nagaasaa Hundee jedhamu jedhutti, sababni qubeen ‘L’ dura buufameef, ulaagaalee armaan gadii kana waan guuteefi jedha.
1- Barreessuudhaaf kan salphaa ta’e
2- Sagaleessuudhaaf kan salphaa ta’e
3- Irra deddeebi’ee kan dhufu
Akkuma isaan jedhanittuu yoo deemne, qubeen ‘A’ sagaleessuudhaan salphaa tahuu fi irra deddeebiin dhufuu keessatti qubee ‘L’ ni dursa jedheen amana. Yoo jechootni afaan Oromoo qubee ‘L’ eegalu kan ‘A’ eegalurra hedduudha jettanis ulaagaa irra deddeebi’uu waan jettaniif, mee barruu ani barreesse tana qofa keessatti ‘A’ meeqa akka fayyadame laalaa! Irra deddeebii jechuun akkas tahuudha akka ibsa isaaniittti. Sagaleessuudhaanis daa’imni Oromiyaa keessatti yeroo afaan hiikkattu ‘aayyoo’ fi ‘abbaa’ jechuun eegalti. Bakka adda addaatti garagara tahus kanarraa hin fagaatu.
Yaa OPDO waan isin gaafadhu,
– Afaanota 132 kan qubee laatinii fayyadamaa jiran keessaa kan tartiiba isaa jijjiire kami? Kan afaan Oromoo maaltu adda isa godhe?
– Rakkooleen tartiibni qubee fide maali? Barreessuu fi dubbisuu yoo jettan deebii hin tahu. Rakkoon barreessuu fi dubbisuu, hanqina tooftaa barsiisuu fi barsiisaa, akkasumas hanqina meeshaa barnootaa irraa akka madde deddeebi’ee dubbatamaa ture.
– Qubeen warra Chaaynaatuu 莫 baratamaa hin jiruu? Ijoolleen isaanii barreessuu rakkatanii dubbisuun ykn barreessuun duubatti hafanii?
Previous Marii Aggaammii Qubee Afaan Oromoo Balleessu godhamaa jiru irratti tuuta GAOP 2017
Next Tartiiba Qubee Afaan Oromoo jijjiiruun waan boba’aa jirurratti boba’aa dabaluu dha